Solutions – UniqueHMS
Problem solving is the act of definingaproblem and determining the cause of the problem. It isaidentifying, prioritizing, and selecting alternatives forasolution and implementingasolution. Findingasuitable solution for issues can be accomplished by following the basic problem-solving process, Problem solving resources and methodology outlined below.
ပြဿနာဖြေရှင်းရေးနည် ဆိုသည်မှာ ပြဿနာတစ်ခုကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပြဿနာ၏ အကြောင်းရင်းကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း၏ လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အဖြေတစ်ခုအတွက် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ဦးစားပေးခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြဿနာများအတွက် သင့်လျော်သောအဖြေကို ရှာဖွေခြင်းသည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အခြေခံ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းအရင်းအမြစ်များနှင့် နည်းစနစ်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ပြီးမြောက် အောင်မြင် နိုင်ပါသည်။
POS data path missing Point of Sales Sytem ဖွင့်ရာတွင် Data Path Missing ပြနေပါသည်။ Server နှင့် Connection ရှိမရှိ စစ်ကြည့်ရာတွင် Connection မရှိပါ။
Connection မရှိသောကြောင့် Data Path Missing ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ Network များအား ပြန်စစ်ရန် ပြောထားပါသည်။
FO NO AR Account FO System တွင် City Ledger လွဲရာတွင် NO AR Account ဟု ပြနေပါသည်။ City Ledger လွဲမည့် Company တွင် AR Profile မရှိသေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
AR System တွင် Profile ဆောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
FO Revenue ဒီနေ့ Checkout ထွက်သွားသော အခန်းတွင် Revenue များ ပို ထည့်မိ၍ ဘယ်လိုဖြေရှင်း၍ ရနိုင်မလဲ။ Checkout ထွက်သော အခန်းကို checkin ပြန်သွင်းပြီး စာရင်းမှန်အောင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
FO Market segment statistic တွင် Complimentary အခန်းမရှိပဲ တစ်ခန်းပြနေပါသည်။ Inhouse အခန်းတစ်ခန်းကို Complimentary market code မှားရွေးထားမိသောကြောင့် Complimentary တစ်ခန်း ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။
Reservation များကို မှန်ကန်သော market code ရွေးမှသာ report မှန်ကန်စွာ ထွက်နိုင်ပါမည်။
FO Reservation 1ခုတွင် Ratecode ရွေးရာတွင် Rate setup not found ဟု ပြနေပါသည်။ ထိုသို့ ပြရခြင်းမှာ ထို Ratecode ကို create လုပ်ရာတွင် Yeild management function မထည့်ထား‌‌သောကြောင့်ဖြ့စ်သည်။
FO FO System တွင် City Ledger လွဲရာတွင် NO AR Account ဟု ပြနေပါသည်။ City Ledger လွဲမည့် Company တွင် AR Profile မရှိသေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
FO ဒီနေ့ Checkout ထွက်သွားသော အခန်းတွင် Revenue များ ပို ထည့်မိ၍ ဘယ်လိုဖြေရှင်း၍ ရနိုင်မလဲ။ Checkout ထွက်သော အခန်းကို checkin ပြန်သွင်းပြီး စာရင်းမှန်အောင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
FO AR တွင် City Ledger လွှဲချင်သော company profile နှင့်
သက်ဆိုင်သည့် AR Profile ရှိသော်လည်း City Ledger လွှဲမရ ဖြစ်နေပါသည်။ Ctiy Ledger လွှဲလိုလျှင် အောက်ပါ အချက် နှစ်ချက်နှင့် ပြည့်စုံရပါမည်။
၁. AR Profile တည်ဆောက်ပြီး FO Company Profile နှင့် Link ချိတ်ထားရမည်။
၂. မိမိ City Ledger လွှဲလိုသည့် Folio ကို သက်ဆိုင်ရာ Company မှ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
သို့မှသာ City Ledger လွှဲနိုင်ပါမည်။
FO Company Statistic Report တွင် Agoda Company Profile နှစ်ခု ဖြစ်နေပါသည်။ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရသနည်း။ Reservation ပြုလုပ်ရာ company Profile ထည့်ရာတွင် ရှိပြီးသား Company Profile မရွေးပဲ အသစ် ထပ်မံ ပြုလုပ်မိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
Company Profile ကို Merge ပြုလုပ်ပြီး တစ်ခုထဲ ဖြစ်အောင် ပေါင်းနိုင်ပါသည်။
FO Hotel တွင် တည်းသွားသော တစ်နှစ်တာ လူဦးရေ အရေအတွက်လို သိချင်ပါသည်။ Manager Report တွင် လူအရေအတွက်၊ စုစုပေါင်း တည်းသွားသော အခန်းအရေအတွက် အားလုံး ကြည့်နိုင်ပါသည်။
FO System တွင် Forecast & Availabiltiy ကြည့်ရာတွင် Arrival အခန်းအားလုံး
checkin ဝင်ပြီးသား ဖြစ်သော်လည်း Arrival ၁ခန်း ကျန်နေသည်ဟုပြနေပါသည်။ Hotel တွင် မီးပျက်သွားတာ ရှိပါသည်။ မီးပျက်သော အခါ ubs များ proper အလုပ်မလုပ်ပဲ system အသုံးပြုနေရင်း PC ပိတ်သွားသောကြောင့် ထိုသို့ မှားယွင်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။ Maintenance-> Availability ပြန်လည် run ပြီးပါက မှန်သွားပါမည်။ ထိုသို့ မဖြစ်ရအောင် ubs များ proper အလုပ်လုပ်မလုပ်ကို schedule နှင့် စစ်သင့်ကြောင်း အကြံပေးခဲ့ပါသည်။
POS Point of Sales Sytem ဖွင့်ရာတွင် Data Path Missing ပြနေပါသည်။ Server နှင့် Connection ရှိမရှိ စစ်ကြည့်ရာတွင် Connection မရှိပါ။
Connection မရှိသောကြောင့် Data Path Missing ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။
Network များအား ပြန်စစ်ရန် ပြောထားပါသည်။
POS Point of Sales System တွင် Bill Amount မှားချမိ၍ မည်သို့ ပြန်ပြင်၍ ရနိင်မလဲ။ 1. မိမိ မှားပေးမိသော Bill ကို Cancel Paid အရင်လုပ်ပါ။ ၎င်း Bill သည် Cashier screen တွင် ပြန်လည် ပေါ်လာပါမည်။
2. ၎င်း Table ထဲသို့ ဝင်၍ မိမိ ပြင်လိုသည်ကို ပြင်ပြီး အမှန် Bill ကို payment ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။